Efa nitsangana marina tokoa ny Tompo – Tsodrano
Asan’ny Apostoly 10.34-43
Eny ry havako malala miaraka amintsika mandrakariva Jesosy, araka ny efa nolazainy, ambara-pahatonga ny fahataperan’ izao tontolo izao Matio 28 : 20 Ny Filazantsara no manambara amintsika androany fomba roa hahazoantsika mamantatra an’i Jesosy velona eny an-dalana ombantsika. Eo amin’ny fiainantsika indraindray dia misy ny fahakiviana, ny fahadisoam-panantenana. Mafy loatra mazàna ny fiainana ka toa teha-hikiaka isika hoe : » Misy ihany ve izao Andriamanitra izao ? » Nefa Jesosy tsy lavitra antsika. Eo Izy ao anatin’ny fahatsotsatsika sy ny fahalementsika aza izy. Mety ho mahafantatra betsaka ny momba an’i Jeosy isika saingy tsy tena mahalala Azy tanteraka. Noho izany dia toa miafina amintsika Izy. Toa ny nandao antsika mihintsy aza no iheverantsika azy. Kanefa dia eo Izy. Izy roa lahy nandeha ho any Emaosy ireto dia tena kivy tanteraka. Nefa dia tena nahafantatra an’i Jesosy. Fantany tsara fa avy any Nazareta Jesosy. Nambarany fa Mpaminany lehibe, mahery amin’ny teniny sy ny asany, nitory teny tetsy sy teroa, nanasitrana, nanao fahagagana, voaheloky ny mpisorona ho faty, nohomboina tamin’ny hazo fijaliana. Ary nanampy izany dia nambarany fa ny vehivavy namany dia nilaza fa foana ny fasana nandevenana Azy, nolazaina aza fa nahita anjely ireo vehivavy ireo izay nilaza fe velona Jeosy. Raha ny marina dia ny Filazantsara iray manontolo mihintsy no notantarainy. Koa nahoana no kivy ? inona no tsy ampy ? Ny Finoana. Hay tsianjery ny fanekem-pinoana fa tsy latsaka tao am-po. Jesosy niteny azy mafy hoe : « Ry adala sy votsa saina, ka tsy mino… » Moa ry havana tsy toy izany koa va isika indraindray, hany ka tampina ny masontsika ka tsy mahita an’i Jesosy.